Xiaomi Mi Band2သည်တရားဝင်ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Villamandos | | ပစ္စည်းများ, NOTICIAS
Xiaomi သည်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့တရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည် Xiaomi မက်စ်အခြားမည်သည့် flash device နှင့်မျှမရောက်ရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းယနေ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကတင်ပြခဲ့သည် အသစ် Xiaomi က Mi Band2ကြောင်းသတင်းနှင့်အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူတင်ဆောင်ရောက်ရှိ။
ယမန်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှအက်ပဲလ်နှင့်ဆမ်ဆောင်းရောင်းအားသုံးဆမြင့်တက်ခဲ့သောတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏သဘောတူစာချုပ်ကို၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်နှင့်အမေရိကန်သို့တရားဝင်လမ်းဖြင့်ရောက်ရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့တွင်ရစ်သမ်သည်မကျဆင်းဘဲ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအဝတ်အစားအသစ်သည်သူတရားဝင်လည်ပတ်နေပြီး၎င်းသည်သူလည်ပတ်နေသောကုမ္ပဏီကိုများစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည် Hugo Barra.
ဒီဝတ်ဆင်မှုအသစ်ကိုဆန်းစစ်ခြင်းမပြုမီ၊ Xiaomi Mi Band ၏ပထမဆုံး version သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစားရောင်းချမှုဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ယခု Xiaomi Mi Band2သည်ပထမဆုံးအောင်မြင်စွာတွက်ချက်ရန်အတွက်ပထမခြေလှမ်းကိုယူပြီးဖြစ်သည်။ လာမယ့်လတွေမှာလက်ကောက်။
1 OLED မျက်နှာပြင်၊ Xiaomi Mi Band2၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအသစ်စက်စက်
4 Xiaomi သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်သို့နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါသလား။
OLED မျက်နှာပြင်၊ Xiaomi Mi Band2၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအသစ်စက်စက်
Xiaomi Mi Band2အသစ်၏အဓိကအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းတွင်ပါဝင်သည် ၀.၄၂ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်သို့မဟုတ်အိပ်နေစဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကိရိယာ၏ပထမဗားရှင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် application တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ယခုမျက်နှာပြင်အသစ်မှဒေတာအားလုံးကိုမြင်နိုင်သောကြောင့်ယခုမလိုအပ်တော့ပါ။
မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဤသွင်ပြင်လက္ခဏာသည် Xiaomi Mi Band ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ။ သို့သော်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ဤရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ နက်ရှိုင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုတရားဝင်တရားဝင်တင်ပြသောဒီ Mi Band2ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အထိ 20 ရက်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်.
ဤအချက်အလက်ကို Xiaomi မှဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်သည့်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် ၄ ​​င်းကိုသီးသန့်ဖယ်ထားရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တစ်ဝက်ပင်ပေးမည်ဆိုပါက၎င်းသည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်ဝတ်ဆင်မှုမျိုးမှမဆိုနှစ်ဆဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည်။
Xiaomi Mi Band2အသစ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အရွယ်အစား: 40.3 × 15.7 × 10.5 မီလီမီတာ
၀.၄၂ လက်မ OLED အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်။
ခြေလှမ်းများ၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ
ဘလူးတုသ် 4.0 BLE
70 mAh ဘက်ထရီသည် Xiaomi ၏အဆိုအရရက် ၂၀ အတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အရကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းပေးလိမ့်မည်
ပစ္စည်းများ: ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပလပ်စတစ်နှင့်လူမီနီယံနှင့်သိုင်းကြိုးများအတွက် thermoplastic copolyester
ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သ, ငါတို့နောက်ဆုံးပစ္စည်းအကြောင်း, အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအကြောင်းပြောဆိုသွားမည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီလိုစက်မျိုးမျိုးမှာတရုတ်ထုတ်လုပ်သူကအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရောင်းမယ်၊ သင်အောက်မှာအနည်းငယ်တွေ့ရမယ်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိနိုင်ဘူး။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံး Mi Band ၌ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ အချို့သောအလူမီနီယံတစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူသော်လည်းငါတို့အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပလပ်စတစ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
စက်၏ပိတ်မှုသည်ဤ Xiaomi Mi Band2၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ ပထမဆုံးဗားရှင်းရှိခဲ့သူအားလုံးသည်မူရင်းသိုင်းကြိုးအသစ်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်သောထိုပိတ်ပစ်ခြင်းပြtheနာများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားတာကဒီရှုထောင့်ဟာတိုးတက်လာခဲ့တယ်၊ ငါတို့တွေ့ခဲ့တာတွေကမများသောကြောင့်ငါတို့တွေအများကြီးကြောက်တယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Xiaomi သည်ဇွန်လ ၇ ရက်တွင် Xiaomi Mi Band ရရှိနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်သစ်၏စျေးနှုန်းသည်နောက်တဖန်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကသုံးစွဲသူအမြောက်အများကိုသွေးဆောင်လိုသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်း ၎င်း၏တရားဝင်တရုတ်စျေးနှုန်းမှာယွမ် ၁၄၉ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာယူရို ၂၀.၂၀ နှင့် ၂၂.၆၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။။ သံသယမရှိဘဲ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ထဲရှိအခြားအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်အခြားနိုင်ငံများ၌ရရှိနိုင်မှုသည် Xiaomi ၏ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Xiaomi Mi Band2ကိုတရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပြနာ။ အရာအားလုံးရှိနေသော်လည်းလာမည့်ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီမှတဆင့်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်၎င်းကိုဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Xiaomi သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်သို့နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါသလား။
Xiaomi Mi Band2ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအရာရာတိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ဟာထူးခြားတဲ့ကိရိယာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုပြသပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုစွဲဆောင်မှုမြန်စေလိမ့်မယ်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးတွက်ချက်သည့်လက်ကောက်နှင့်အတူဝတ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်ကိုဇောက်ထိုးလှန်နိုင်ခဲ့သည် ဒီဒုတိယမူကွဲနဲ့အတူငါဟာနောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ကိုရိုက်ခတ်နိုင်မှာကိုအလွန်ကြောက်တယ်.
မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူကမျှကျွန်ုပ်တို့အားအလားတူပစ္စည်းများကို ပေး၍ မရနိုင်ပါ။ သငျသညျကို virtual စတိုးကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ရုံဤအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အတွက်လဲဒီဇိုင်းဒါမှမဟုတ်အသုံးများတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်စက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ပေးရတဲ့စျေးနှုန်းအရမ်းနိမ့်ကျတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဂရုစိုက်မှာလဲ။
Xiaomi Mi Band2အသစ်နှင့်၎င်း၏အံ့မခန်းသောစျေးနှုန်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်သနည်း။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။ သင်ဤဝတ်ဆင်မှုအသစ်ကိုစျေးကွက်တွင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရရှိနိုင်လျှင်ချက်ချင်းလက်ငင်းဝယ်ယူလိုပါကလည်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Xiaomi Mi Band2သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်